Free Video Players u Qaabka File FLV
Video Free Player u Qaabka FLV File
Tan iyo taageero daayeen ee Flash by Adobe, users lagu asal ahaan ka harsan doonaan taladoodii. Qaar ka mid ah aysan awoodin in ay raadiyaan xal kale, halka inta kale ee kaliya ay naftooda ay xoojiso dhinaca qaabab kale file. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay noqon doontaa ka badan la taaban karo oo ku habboon haddii aad leedahay ciyaaryahan video taageera loo maqli karo ee FLV video files. Taasi waa sababtoo ah waa nooc ka mid ah file aad caadi u ah, gaar ahaan files bixi. Haddii kale, waxaad sidoo kale ku rakiban kartaa lagama maarmaanka fur-in / dari-on / codec si loo fududeeyo loo maqli file FLV ee. Ikhtiyaar kale oo macne ka mid ah diinta files FLV aad la video Converter kama dambaysta ah ka hor loo maqli karo ciyaaryahanka video aad doorbidid.
Talinayo Players FLV Video
Windows iyo Mac
Ciyaaryahanka aadka configurable qalab ku daray
Bareesada-in la heli karo WordPress
Waxaa la dhisay-in awoodaha Ajax
Waxaa Download halkan
Kaqabashada Cinwaan Automatic
Hababka loo maqli karo kala duwan
Taageer files uncompressed sida DIVX, MKV, AVI, MTS iyo iwm
Toos ah iyo si sahlan loo isticmaalo
Ma u baahan tahay codec dheeraad ah
Radidiyaha qaabab kale sida MOV, MP4, 3GP, M4A, M4V iyo iwm
macruufka iyo Android
Voice amar video search iyadoo ay xulashada bookmark
Faylal ay shareable goobaha bulshada
Muuqaalada Upgradable dhex acagt
Taageerada qaabab loo jecel yahay sida AVI, MP4, MKV, MOV iyo iwm
Astaamaha sareeya sida audio / qabsaday screen, saamaynta iyo iwm
Interface Skinnable la daraasiin muuqaalada dhisay-
YouTube goobidda iyo taariikhqorihii
In ka badan 270 ku dhow oo dhan files warbaahinta dhisay-in codec oo loo maqli karo, DVD-yada loo dhan yahay
Radidiyaha kala duwan ee files warbaahinta, DVD-yada loo dhan yahay
Taageerada subtitles multi-track
Goobaha dheeraad ah iswaafajin on muuqa, audio, nuur iyo iwm
Ad-free la bookmarking sahlo
Taageerada ku dhowaad dhammaan qaabab video, DVD-yada loo dhan yahay
Mirror ka kooban in ka badan si ay u qalab kale sida PC, TV iyo iwm
Ma u baahan tahay rakibo codec dheeraad ah
Taageerada qaabab video kale sida MPEG4, XVID, RMVB, M2T iyo iwm
Wareegtay Screen badbaadiyey galay image files
Bareesada-tago /-socodka & codec
FFDShow la shaqeeyaa ugu dibadda ama 3 ciyaartoy xisbiga video. Waa taageero ah codec sare liiska weyn ee audio iyo video qaabab file. Waxaa sidoo kale ku qalabaysan sida diirada processing optional in ay yihiin dynamicalled saari karo iyo sidoo kale hadalkiisa ku daray.
Dheeraad ah oo ku saabsan Baro
The FLV codec plugin waa uun socon for Windows Media Player. Waa xirmo rakibo la codec FLV oo awood aad Windows Media Player in Radidiyaha files warbaahinta FLV. Waxa kale oo uu sharxayaa ayaan kuugu Windows Media Player sida video korkiisa rakibidda codec FLV ka plugin ciyaaryahan default.
A Media Player Classic waxaa ka mid ah la rakibo oo ka mid ah Windows Essentials codec Pack (WECP). Waxa kale oo la jaan qaada kale dibadeed ama 3 ciyaartoy xisbiga video. WECP ayaa asal ahaan waa ururinta codec warbaahinta iyo qalabka kale ee la xiriira in aad oggolaan doontaa in ku dhow loo maqli karo 100% oo dhan soo bixi online videos ah.
On top of xawaaraha diinta aalladda-degdeg ah, ee Video Converter Ultimate sidoo kale waxay bixisaa noocyo kala duwan oo filaayo video goobaha ee files gediyay. Waxa kale oo taageero ah tiro balaadhan oo ah la gelin iyo wax soo saarka file qaabab. Ka sokow in, aad xaalkaa kartaa video files sida ugu Windows Movie Kan sameeyey . Waxaa awood u leh adeegsiga qaababka ay dheeraad ah si ay u soo bixi jecel aad online videos ka YouTubeor wax Waxaad kale video online goobaha caanka ah .
Hel Streamclip Best MPEG Kale ee OS X Mavericks
View dhoofiyo 3D Video ku saabsan PC ama TV 3D
> Resource > Video > Free Video Players u Qaabka FLV File